Padova — Weather ny volana, rano mari-pana
World Resorts Firenena Italia Padova
Padova — Olbia Padova — Monterosso Padova — Milano Padova — Massa Lubrense Padova — Maiori Padova — Pesaro Padova — Pizzo Padova — Porto Venere Padova — Pozza de Fassa Padova — Ragusa
Eo ho eo isan'andro ny mari-pana ambony indrindra — 30.7°C Aogositra. Eo ho eo ny mari-pana ambony indrindra alina — 20.6°C Aogositra. Eo ho eo isan'andro, fara fahakeliny, ny mari-pana — 7.2°C in Janoary. Ny eo ho eo, fara fahakeliny, ny alina mari-pana — 3.4°C in Janoary.
Eo ho eo ny mari-pana ambony indrindra ny rano — 26.3°C raikitra Aogositra. Eo ho eo, fara fahakeliny, ny mari-pana ao anaty rano — 8.2°C raikitra Février.
Maximum rotsakorana — 71.8 mm ny Dia noraketina May. Minimum rotsakorana — 23.9 mm ny Dia noraketina Desambra.